Jose Mouriho oo ka hadlay waxay United uga dhigan tahay la'aanta Fellaini
Thursday, July 19th, 2018 - 07:04:11
Tuesday September 12, 2017 - 11:00:35 in Wararka by Kubad Bile
Manchester United macallinkeeda Jose Mourinho ayaa shaaca kaqaaday inuu dareemo tabar daro marka kooxda uusan kujirin Marouane Fellaini.
Fellaini ayaa waqti isku dhaf ah kusii qaatay Old Trafford tan iyo markii uu Everton kaga soo wareegay 2013-kii.29-jirkaan ayaa u muuqda mid kamid ah ciyaaryahaanad ay kutiirsan tahay kooxda katimaada waqooyi-Galbeed ee Ingiriiska.
Fellaini ayaa ahaa ciyaaryahaan aanan kaqeyb galin kulankii United 2-2 ee la gashay Stoke City. waxaana shaki laga galinayaa inuu ciyaari karo kulanka caawa Champions League United Old Trafford kusoo dhaweyn donnto Basel.Laakin Mourinho ayaa sheegay ciyaaryahaanka Belguim-ka u dhashay inuu ciyaari doono haddii qoloada caafimaadka ay kuguuleystaan dabiibkiisa.
54-sano jirkaan ayaa suxufiyiinta usheegay "Fellaini waa ciyaaryahaan muhiim ii ah aniga. wax badan ayuu muhiim ii yahay inta aad adi qayaasi kartid kabadan"
"Waxaan dareemayaa tabar daro la'aanta Fellaini ee kooxdayda. wax dhib ah malaha hadii uu garoonka kujiro ama kursiga keydka. haddii xaladiisa ay hagaagto.Fellaini waala soo xulan doonaa. anigana waxaan u baahanahay asaga"